DaVinci Resolve Studio Na-akwado Nice Shoes 'Remote Post Production Workflow | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa
Home » Apụta » DaVinci Resolve Studio Na-akwado Nice Shoes 'Remote Post Production Workflow
Fremont, CA - February 19, 2021 - Ntucha Blackmagic taa kwuputara na Senior Colorist Maria Carretero nke ụlọ ọrụ ihe nkiri bụ Nice Shoes remotely graded the award winning feature film “Waikiki” using DaVinci Resolve Studio, tinyere ọrụ ndị kwesịrị ịrịba ama dị ka vidiyo egwu "Lost Horse" na Sundance 2021 film "All Light, Ebe niile. ” Akpụkpọ ụkwụ Nice dabere na DaVinci Resolve Studio dị ka akụkụ nke arụmọrụ ya dịpụrụ adịpụ na 2020 n'ofe mpaghara New York, Toronto, Boston, Chicago na Minneapolis.
"Waikiki," ihe nkiri dị egwu nke sitere na Hawaii filmmaker na onye otu ụlọ ọrụ Sundance Institute Native Lab ibe Christopher Kahunahana, na-enye nkowapụ na-adịghị ahụkebe banyere ọnọdụ gritty nke ndụ na paradaịs. N'oge nrụpụta post Carretero dabere na New York na Digital Intermediate (DI) Onye Mmepụta Katie Hinsen na Los Angeles na Kahunahana na Hawaii. Ndị otu rụkọtara ọnụ na njikọ vidiyo ziri ezi, agba ziri ezi nke Nice Shoes mepụtara. Emepụtara ya maka ndị ahịa mgbasa ozi, usoro dị mma nke Nice Shoes iji mezuo ihe dị iche iche nke ọrịa na-efe efe wee gbasaa maka ihe nkiri na episodic ya.
Dị ka Hinsen kwuru, “Anyị na-enwekarị ndị ahịa ole na ole kwa ọnwa site na iji arụmọrụ dịpụrụ adịpụ, mana ugbu a ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile. Anyị na-enwekarị ọtụtụ oge nnọkọ a na ebe ọrụ, mana anyị tụlere iji nwee ma onye na-ese ihe ma onye ahịa ahụ n'ụlọ ha, na-eji njikọ agba elele nke ọma na ndị na-enyocha ha iji lelee mmepụta nke DaVinci Resolve Studio.
Ọ gara n'ihu, “Ọtụtụ n'ime ọrụ anyị, site na afọ gara aga ma na-aga n'ihu na 2021, jiri atụmatụ mmekorita nke DaVinci Resolve Studio, bụ nke jikọtara ọnụ na arụmọrụ anyị dị anya. N'ezie, ọ na-enyere anyị aka iji akụ anyị mee ihe nke ọma, ebe ndị na-enyere anyị aka na ndị ndezi ntanetị nwere ike ịnweta ọrụ ọ bụla na igwe ọ bụla n'oge ọ bụla. Tupu ị gawa ebe dị anya, onye na-enyere aka ga-abanye n'ime ụlọ ndị na-acha agba ahụ wee tụọ otu usoro ahụ. Ugbu a, ha nwere ike banye n'ime usoro iheomume n'agbanyeghị ebe ha nọ n'ụwa n'anụ ahụ. O meela ka anyị nwee ike iji ndị otu anyị nke ọma rụọ ọrụ n'ebe dị iche iche na oge oge, nke dị oke mkpa maka ọrụ dịka 'Waikiki.' ”
Ihe oru ozo di anya ozo nke Carretero bu oru bu vidio egwu nke Asaf Avidan "Lost Horse". Ọbụghị naanị na agbagburu oru ngo ahụ ma zipụ ya n'oge apụrụ iche na Director Adi Halfin dị na Berlin, mana dị ka Carretero kwuru, Halfin nwere ezigbo ihe ọ masịrị ya mgbe ọ bịara n'ile ya anya. Ọ sịrị, "Ọ na - achọkarị ihe dị nro, n'ihi ya, ọ bụ ọtụtụ ọrụ na - ejikọ ọkwa saturation na - enweta ihe ọmụma n'ime ndò iji nwee mmetụta na ị ga - eku ume ikuku ihe onyonyo ahụ nwere," ka o kwuru.
“DaVinci Resolve Studio abụrụla nnukwu uru nye Maria na ndị ọzọ na-acha agba agba anyị. Njikwa agba na ngwaọrụ arụkọ ọrụ enyerela aka dịka anyị gbanwere ma nụchaa arụmọrụ anyị mgbe anyị na ndị na-eme ihe nkiri na-emekọrịta ihe n'akụkụ ụwa niile, ”ka Hinsen kwubiri. "Ọ bụ ezie na onye ọ bụla ghọtara eziokwu nke afọ gara aga, DI dịpụrụ adịpụ abụghị ihe ọtụtụ atụmatụ ndị ahịa na-ejikarị, DaVinci Resolve Studio nyekwaara anyị aka nke ukwuu ime ka ndị kwere ekwe si n'aka ndị ahịa anyị."
Foto ngwaahịa nke DaVinci Resolve Studio na ihe ndị ọzọ niile Ntucha Blackmagic ngwaahịa dị na www.blackmagicdesign.com/media/images
Ntucha Blackmagic na-emepụta ihe kachasị mma video editing ngwaahịa, ihe nkiri vidio ese foto, ndị na-emegharị ihe nkiri, ndị na-emegharị vidio, nlekota vidiyo, ndị na-emegharị ihe nkiri, ndị na-emepụta ihe nkiri, ndị na-ekpuchi ihe nkiri, ndị na-emepụta ihe nkiri na ndị na-emepụta ihe nkiri. Ntucha Blackmagicna DeckLink kaadị kaadị na-emepụta mgbanwe na mma na ịba uru na post mmepụta, ebe Emmy ™ na-emeri Davinci agbazizi ngwaahịa na-achịkwa telivishọn na ụlọ ọrụ ihe nkiri kemgbe 1984. Ntucha Blackmagic na-aga n'ihu na-agbasa mmemme gụnyere 6G-SDI na 12G-SDI na ngwaahịa 3D stereoscopic na Ultra HD arụ ọrụ. Ntọala site na ụwa na-ebute ndị na-ede akwụkwọ mmepụta na ndị injinia, Ntucha Blackmagic nwere ọfịs na USA, UK, Japan, Singapore na Australia. Maka ozi ndị ọzọ, biko gaa www.blackmagicdesign.com
Ntucha Blackmagic Davinci Resolve Studio 2021-02-19
Previous: Comprimato JPEG2000 codec jikọtara ya na Interra Systems 'File QC platform
Osote: MOD na-eme ka oriri na nkwalite na Big Game